सफलताको लागि तपाईंको सञ्चार | Martech Zone
सफलताको लागि तपाईंको मार्ग संचार गर्दै
शुक्रबार, मार्च 12, 2010 आइतबार, अगस्त 19, 2012 एलेन डनिगान
सर्जनहरू मानसिक शल्यक्रियाको लागि तयारी गर्छन्। एथलीटहरू मानसिक रूपमा ठूलो खेलको लागि तयारी गर्दछन्। तपाईंले पनि आफ्नो अर्को अवसरको बारेमा साइक लिन आवश्यक छ, तपाईंको सब भन्दा ठूलो बिक्री कल वा प्रस्तुतीकरण।
विकास गर्दै राम्रो संचार कौशल बाँकी प्याकबाट तपाईंलाई अलग सेट गर्दछ। तपाईंलाई कुन सीप चाहिन्छ भनेर सोच्नुहोस्:
सुस्त सुन्ने तरिकाहरू - के तपाईलाई वास्तवमै थाहा छ तपाईको ग्राहकलाई के चाहिन्छ र किन? उसको पीडा के हो? के तपाईं यो सुन्नुहुन्छ र उसले कसरी भन्छन्?
टोन-सेटिंग बॉडी भाषा - के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको ग्राहकको शरीर भाषा कहिले दर्पण गर्ने? के तपाइँको शरीर भाषा ले तपाइँको ग्राहक संग राम्रो वा अधिक बारम्बार कुराकानीको लागि टोन सेट गर्दछ?
Just-Right Inonation र बोलीको दर - के तपाईंले कुरा गर्ने तरिकाले तपाईंको ग्राहकबाट ऊर्जा र कार्यलाई प्रेरणा दिन्छ? वा के तपाई आफ्नो ग्राहकलाई अन्य विषयहरुमा बिरानो भेट्नुहुन्छ वा तपाईको उत्पादन / सेवाको साथ ऊब पाइन्छ? ग्राहक गर्छ प्राप्त तपाईंको उत्पादन वा सेवाले उसको पीडा हल गर्दछ?
शक्तिशाली, प्रेरणादायक आवाज नियन्त्रण - तपाईं प्रभावशाली लाग्नुहुन्छ? के तपाईंको आवाजले व्यक्तिलाई सहज बनाउँदछ ताकि उनीहरूको पीडाको बारेमा उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा तपाईं खोल्न सक्नुहुन्छ? वा तपाईं तनाव, नर्भस, अव्यवस्थित, फुलेको, ढिलो, वा बोर भएको आवाज गर्नुहुन्छ?
तपाईले पहिले नै थाहा पाउनु भएको सन्देश तपाई तपाईको ग्राहकले सुन्नु भएको हो। त्यो सजिलो भाग हो। र तपाईं जे भए पनि तपाईले 60०-दोस्रो पिच भन्नु भयो वा तपाईंको बिक्री सामग्री मार्फत जानु भए पनि त्यहाँ त्यस्तो व्यक्तिहरू छन् जसले उक्त सन्देशसँग कनेक्ट गर्दैन; तिनीहरू बस गर्दैनन् यो प्राप्त गर्नुहोस्। एउटा कारण यो हो किनकि सामान्यतया तपाईको सन्देश केवल जब तपाईले के भन्नु हुन्छ र कसरी तपाईले यो मिल्दछ भनेर प्रतिध्वनित हुन्छ।
कसरी भन्ने तपाईको सन्देशले सबै फरक पार्छ
र यो गर्न को लागी एक कला छ। त्यस अर्को ठूलो कलमा जानु भन्दा पहिले, तपाईं आफ्नो ग्राहकसँग छोड्न चाहानुभएको भावनाको बारेमा सोच्नुहोस्; भावना साझा गर्न को लागी। उदाहरण को लागी, विचार गर्नुहोस् कि तपाई एक न्यानो, मैत्री सन्देश को लागी शुरू गर्न चाहानुहुन्छ र विश्वस्त, शक्तिशाली, वा प्रभावशाली सन्देश को लागी अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक भावना जुन तपाई व्यक्त गर्न चाहानुहुन्छ चित्रण गर्न सकिन्छ
मानसिक तस्वीर वा छवि
मिलान शरीर भाषा
तपाईको कुराकानीको शैली (HOW) ले तपाइँको सन्देशसँग मेल खान्छ भनेर निश्चित गरेर तपाइँको कलको लागि तयारी गर्नुहोस्। एक न्यानो, मैत्री सन्देश को साथ शुरू गर्न:
मुख्य शब्दको बारे सोच्नुहोस् जसले न्यानो, मैत्री भावनाहरू उत्पन्न गर्दछ: कोमल, शान्त, सूर्यको प्रकाश, आरामदायक। त्यो एक चाबी शब्द आफैंमा धेरै पटक दोहोर्याउनुहोस् जबसम्म तपाई यो महसुस गर्नुहुन्न।
मानसिक छवि चित्रण गर्नुहोस्। बच्चा वा तपाईंको जीवनसाथीलाई अging्गालो हाल्नुहोस्, फायरप्लेसले कम्बलमा बेर्नु, समुद्रको किनारमा उज्यालो घाममा हिड्दै। चित्र स्पष्ट र ज्वलन्त बनाउनुहोस्।
तपाईंको आवाजको स्वर परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईंको शरीरको स्वर र प्लेसमेन्ट परिवर्तन गरेर। हाँसो ऊर्जाको साथ स्पष्ट कुरा गर्नुहोस्। चल्नु। तपाईको आन्दोलनहरू ठूलो बनाउनुहोस्।
र शक्ति र प्रभावको साथ जारी राख्न:
मुख्य शब्दको बारे सोच्नुहोस् जसले शक्ति र प्रभावको भावना जगाउँदछ: बलियो, दृढ, विश्वस्त
त्यस तरीकाले आफूलाई चित्रित गर्नुहोस्। कल्पना गर्नुहोस् सबैभन्दा ठूलो कथा बताउने व्यक्ति, वा सबै कोचहरू मध्ये सबैभन्दा महान, एक वर्दीधारी कमाण्डर, एक दर्शकसँग कुरा गर्ने विशेषज्ञ श्रोताको साथ तपाईंको प्रत्येक शब्दमा टाँसियो। अब तपाईलाई आफ्नो कल्पना गरीएको सन्देश दिईएको कल्पना गर्नुहोस्। आफैंलाई शान्त, नियन्त्रणमा, जोनमा तस्वीर दिनुहोस्।
शारीरिक भाषा: यदि तपाईं शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन चाहनुहुन्छ भने, उठ्नुहोस्। उत्तम आसन। बलियो हात इशारा प्रयोग गर्नुहोस्। धेरै वरिपरि नजानुहोस्। राम्रो आँखा सम्पर्क कायम राख्नुहोस्। कोठामा वस्तुहरू नहेर्नुहोस्; केवल व्यक्तिहरू। फोनमा बोल्दा, आफ्नो आँखाहरू डुलाउन नदिनुहोस्। एक व्यक्तिको तस्वीरको साथ आँखा सम्पर्क बनाउनुहोस् ... उनीसँग कुरा गर्नुहोस्।
टैग: मार्केटिंग खोज्नुहोस्
व्यवसायमा एक्सेंट संस्थापक र सीईओ एलेन डनिगान एक राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त र प्रमाणित कोच हो जसले आवाज, बोली र अंग्रेजी सुधारको विशेष प्रशिक्षणको साथ काम गर्छ। उनीले स्पीच-भाषा प्याथोलॉजीमा स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गर्छिन् र अमेरिकी स्पीच-भाषा सुनुवाई संघ द्वारा क्लिनिकली सक्षमको रूपमा प्रमाणित गरिएको छ।
सामाजिक मिडिया मार्केटिंग सामाजिक हो, मीडिया होईन
तपाइँको ड्रिप अभियान चिनियाँ पानी यातना बन्न नदिनुहोस्